အမှိုက်ကောက်ရတဲ့ဘဝကနေ သြဇီမှာပညာသင်ဆုရတဲ့အထိ ထူးချွန်ခဲ့တဲ့ ကောင်မလေး…
အမှိုက်ကောက်ရတဲ့ဘဝကနေ သြဇီမှာပညာသင်ဆုရတဲ့အထိ ထူးချွန်ခဲ့တဲ့ ကောင်မလေး… ကမ္ဘောဒီးယား နိုင်ငံရဲ့ နာမည်ကြီးလှတဲ့ ဖနွမ်းပင် အမှိုက်ပုံကြီးမှာ အလုပ်လုပ်ရင်း ကြီးပြင်းလာခဲ့တဲ့ ကောင်မလေးတစ်ယောက်ဟာ အခုလိုရင် ပညာသင် ဆုအပြည့်နဲ့ သြစတေးလျနိုင်ငံ တက္ကသိုလ်မှာ ဆက်လက် ပညာသင်ကြားခွင့် ရနေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ သူမနာမည်ကတော့ ဆိုဖီဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုဖီဟာ Continuous reading
18/06/2019 Yan Naing 0
အရမ်းကိုဆုတောင်းပြည့်လွန်းလို့ မင်းညီမင်းသားတွေမဖူးရဟုအမိန့်ထုတ်ထားရတဲ့ရုပ်ပွားတော်မြတ် စစ်ကိုင်းတောင် တစ်ဖက်ကမ်းကရွှေကြက်ယက် ရွှေကြက်ကျဘုရားတွေဖြစ်ပြီး ဒီဆုတောင်းပြည့်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကတော့ ရွှေကြက်ယက်စေတီအတွင်းမှာ ရှိပါတယ် ။ အနော်ရထာမင်းကြီးလက်ထက်မှာ တစ်ကြိမ်…၊ နရပတိစည်သူမင်းကြီးလက်ထက်မှာ တစ်ကြိမ်… မည်သည့်မင်းညီမင်းသားမှ မဖူးရလို့အမိန့်တော်ထုတ်ပြန်ပြီး အစာင့်တွေချထားကာ သော့ခတ်ထားခဲ့ရတယ် ဆိုတဲ့ ရုပ်ပွားတော်မြတ်ရှေ့ကို တနေ့ကရောက်ခဲ့တယ်။ဘုရားကိုဖူးတွေ့လိုက်တာနဲ့ .. အို … သပ္ပါယ်လိုက်တာ လို့ Continuous reading
သမုဒ္ဒရာထဲမှာရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ ထူးဆန်းပြီး ကြောက်မက်ဖွယ်ရာကောင်းတဲ့အရာ ၁၀ခု
သမုဒ္ဒရာထဲမှာရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ ထူးဆန်းပြီး ကြောက်မက်ဖွယ်ရာကောင်းတဲ့အရာ ၁၀ခု ကမ္ဘာလောကကြီးရဲ့တစ်ဝက်ကျော်လောက်ကိုရေထုတွေနဲ့ဖုံးလွှမ်းထားတယ်ဆိုတာအားလုံးသိပြီးသားဖြစ်ကြမှာပါ။ဒီလိုရေထုတွေနဲ့ဖုံးလွှမ်းနေတဲ့အတွက်မြေပြင်ပေါ်မှာထူးဆန်းပြီးရှားပါးတဲ့မျိုးစိတ်တွေရှိနေသလို ရေထုထဲမှာလည်း လူသားတွေမြင်တောင်မမြင်ဖူးကြသေးတဲ့သတ္တဝါမျိုးစိတ်တွေရှိပါတယ်။သမုဒ္ဒရာဆိုတာမာယာများတဲ့လောကကြီးတစ်ခုပါပဲ။အဲ့ဒီလိုသမုဒ္ဒရာထဲမှာထူးဆန်းပြီးကြောက်စရာကောင်းတဲ့ရေသတ္တဝါကြီးတွေကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ ၁) မှင်စာငါးမန်း မှင်စာငါးမန်းဟာ သူ့ရဲ့ပုံပန်းသဏ္ဍာန်ကြောင့် ငါးမန်းမျိုးစိတ်ထဲမှာရှားပါးမျိုးစိတ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပထမဆုံးစတွေ့တဲ့အချိန်မှာဆိုရင် သိပ္ပံဇာတ်ကားတွေထဲကလို ဂြိုလ်သားတစ်ကောင်ကိုတွေ့သလိုလန့်ဖြတ်သွားမှာအမှန်ပါပဲ။သူ့ရဲ့နှုတ်သီးဟာ လမ်းတစ်လျှောက်လုံးကအရာတွေကို တိုက်ဖျက်သွားမယ့်ပုံပေါက်နေပြီး သူ့ရဲ့အပေါ်သွားစွယ်တွေကလည်း ၃၅ချောင်းကနေ ၅၃ချောင်းထိရှိနိုင်ပါတယ်။အောက်သွားကလည်း ၃၁ချောင်းကနေ ၆၂ချောင်းထိရှိနေပြီး တခြားရေသတ္တဝါတွေနဲ့တိုက်ခိုက်မယ်ဆိုရင် ဒီအကောင်ကြီးပဲနိုင်မယ်ဆိုတာသေချာပါတယ်။အရွယ်ရောက်မှင်စာငါးမန်းတစ်ကောင်ဟာ ၃မီတာကနေ ၄မီတာအထိရှည်လျားပြီး Continuous reading
သမီး လောကထဲတွင်ဆက်ရှိနေပါက ဖေကြီးနှင့်မေကြီး ပိုက်ဆံပိုကုန်မည်” ဟု စာရေးခဲ့ကာ ၉ တန်းကျောင်းသူ ကြိုးဆွဲချသတ်သေ
18/06/2019 Thu Yay 0
သမီး လောကထဲတွင်ဆက်ရှိနေပါက ဖေကြီးနှင့်မေကြီး ပိုက်ဆံပိုကုန်မည် ဟု စာရေးခဲ့ကာ ၉ တန်းကျောင်းသူ ကြိုးဆွဲချသတ်သေ တောင်ငူ၊ ဇွန် ၁၈(သတင်းတမန်) ” သမီး လောကထဲတွင် ဆက်ရှိနေပါက ဖေကြီးနှင့်မေကြီး ပိုက်ဆံပိုကုန်မည်” ဟု စာရေးခဲ့ကာ ၉ တန်းကျောင်းသူတစ်ဦး ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ကြိုးဆွဲချသတ်သေမှု ယနေ့ Continuous reading
နယုန်လပြည့်နေ့ မဟာသမယ အခါတော်နေ့
နယုန်လပြည့်နေ့ မဟာသမယ အခါတော်နေ့ နယုန်လသည် မြန်မာလများတွင် တတိယလ ဖြစ်သည်။ နွေဥတုတွင် ပါဝင်သည်။ နွေရာသီကုန်ဆုံးရန် ၁၅-ရက်မျှသာ ကျန်တော့သဖြင့် စာဆိုပညာရှင်များက ထိုလကို နွေနှောင်းလ၊ နွေစွန်လ-ဟု စာဖွဲ့လေ့ရှိကြသည်။ နွေနှောင်းလဖြစ်သည့်အလျောက် ကဆုန်လတွင် ခြစ်ခြစ်တောက် ပူပြင်းခဲ့သော နေမင်းသည် နယုန်လတွင် အပူရှိန် အားလျော့လာသည်။ Continuous reading
ဦးဝီရသူကို သာသနာ့ သူရဲကောင်းအဖြစ် မဘသ ဆရာတော်ကြီးများ မိန့်ကြား
ဦးဝီရသူကို သာသနာ့ သူရဲကောင်းအဖြစ် မဘသ ဆရာတော်ကြီးများ မိန့်ကြား တရားရင်မဆိုင်ဘဲထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေတဲ့ ဦးဝီရသူဟာ သာသနာရဲ့သူရဲကောင်း တဦးဖြစ်တယ်လို့ မဘသ ဦးဆောင်ဆရာတော်ကြီးတွေက မိန့်ကြားလိုက်ပါတယ်။ ဗုဒ္ဓဓမ္မပရဟိတအဖွဲ့လို့အမည်ပြောင်းထားတဲ့ မဘသအဖွဲ့ရဲ့ ညီလာခံတွေ့ဆုံပွဲကို ရန်ကုန်မြို့၊ အင်းစိန်မြို့နယ် အောင်ဆန်းတောရတပ်ဦးကျောင်းမှာ ကျင်းပရာမှာ အမျိုးဘာသာ သာသနာစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း(မဘသ) အဖွဲ့ရဲ့ ဒု ဥက္ကဋ္ဌဆရာတော်က Continuous reading
ရည်းစားတွေထားခဲ့ဖူးပေမယ့် အသည်းတော့တခါမှ မကွဲဖူးသေးဘူးဆိုတဲ့ ကျော်မင်းဦး မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဘောလုံးမင်းသားလေး ကျော်မင်းဦးကတော့ ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်ပိုင်းက အသက် ၂၃ နှစ်ပြည့်သွားခဲ့ပြီဖြစ်ပြီး မွေးနေ့ပွဲလေးကိုတော့ သူ့ရဲ့ ပရိသတ်တွေနဲ့ မိဘမဲ့ကလေးကျောင်းလေးမှာပဲ ဖြတ်သန်းခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျော်မင်းဦးကတော့ သူ့မွေးနေ့အမှတ်တရလေးတွေနဲ့ သူ့ရဲ့ အချစ်ရေးအကြောင်းကိုတော့ ပြောပြသွားခဲ့ပါတယ်။ ကျော်မင်းဦးကတော့ 8day Continuous reading
သီပေါမြို့နယ်တွင် ကိုရင်အပါး ၂၀ ကျော် အစာအဆိပ်သင့် ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း၊ ကျောက်မဲခရိုင်၊ သီပေါမြို့နယ်၊ ကျင်သီကျေးရွာမှာ ကိုရင်အပါး ၂၀ ကျော် အစာအဆိပ်သင့်လို့ ဆေးရုံတင်ထားရပါတယ်…. ကျင်သီဘုန်းကြီးကျောင်းက ကိုရင်လေးတွေဟာ ဇွန်လ ၁၇ ရက်က နေ့ဆွမ်း စားပြီးတဲ့နောက် ညနေပိုင်းမှာ ကိုယ်ပူ၊ အဖျားတက်ပြီး…. အထက်လန်အောက်လျှောဖြစ်လို့ Continuous reading
လွှတ်တော်တွင်းအစည်းအဝေးပြုလုပ်နေစဉ် Cat Filter ဖြင့် Live လွှင့်မိသောအခါ
လွှတ်တော်တွင်းအစည်းအဝေးပြုလုပ်နေစဉ် Cat Filter ဖြင့် Live လွှင့်မိသောအခါ ပါကစ္စတန် အစိုးရအဖွဲ့ဝင် ကက်ဘိနက်တွေပါဝင်တဲ့ လွှတ်တော် ညီလာခံတစ်ခုကို ပြီးခဲ့တဲ့ သောကြာနေ့က ကရာချိမြို့မှာ ပြုလုပ်ခဲ့တယ်။ အဲ့ဒီအစည်းအဝေးကို စာနယ်ဇင်းသမား တစ်ချို့လည်း တက်ရောက်ခဲ့ကြပြီး ပြည်နယ်ဝန်ကြီး ရှာကွတ် ယူဆွတ်ဖ်ဇိုင် နဲ့ ဂျာနယ်လစ်တွေ အမေးအဖြေပြုလုပ်နေတဲ့ Continuous reading